Nhọrọ kacha mma nke akwụkwọ ọgụgụ ndị ntorobịa
Nyocha nke akwụkwọ akụkọ ụmụaka
Akwụkwọ 3 kacha elu nke Jay Asher
Ikekwe akpọrọ "onye ntorobịa na -eto eto" bụ ihe ngọpụ iji gbanahụ ndapụta ọ bụla gbasara akwụkwọ na -elekwasị anya na ndị okenye karịa ndị na -eto eto. Eziokwu bụ na ndị dere ụdị a na -amụba n'afọ ndị na -adịbeghị anya na nnukwu ihe ịga nke ọma, na -ejikọ akụkọ ịhụnanya na etiti n'etiti ...
Akwụkwọ James Dashner 3 kacha elu
Akwụkwọ ndị ntorobịa nwere ọmarịcha mmasị n'etiti ụdị ịhụnanya (ụdị ndị ntorobịa) na echiche efu ma ọ bụ akụkọ sayensị. Know mara, ụlọ ọrụ na -ebipụta akwụkwọ na -enye iwu na ọ na -eche na ọ ma ebe ọ ga -akụ nke ọma n'etiti ndị na -agụ akwụkwọ mbụ. Agbanyeghị, iji bụrụ onye ziri ezi, anyị nwere ike ịchọta ụdị ọzọ ...
3 akwụkwọ kacha mma Blue Jeans
Ọ bụrụ na enwere onye edemede akwụkwọ ntorobịa pụtara na afọ ndị na -adịbeghị anya na Spain, ọ bụ Blue Jeans. Francisco de Paula Fernández nwere ihe ịga nke ọma na -erigbu pseudonym ọhụrụ na -enye echiche maka ndị na -eto eto na -ege ya ntị. Ịbịakwute ndị na -agụ akwụkwọ n'etiti afọ 12 na 17 nwere ike ime ...
Mma na aka, nke Patrick Ness dere
Akụkọ banyere Todd Hewitt, nke a kọrọ n'akwụkwọ akụkọ a, bụ ihe atụ nke mmadụ n'ihe metụtara gburugburu ya. Naanị ọnọdụ obodo anyị ugbu a ka a na -ele anya dị ka akụkọ ọdịnihu na akụkọ a. Echiche nke akụkọ ifo sayensị na -enye anyị dị ka ihe ngọpụ maka ...
Riquete onye nwere pompadour, nke Amélie Nothomb
Otu n'ime ábụ́bà dị ịtụnanya ugbu a bụ Amélie Nothomb. Akwụkwọ akụkọ ya gara aga nke e bipụtara na Spain, The Count Neville Crime, kpọbatara anyị n'ime akwụkwọ akụkọ nchọpụta pụrụ iche nke nwere nhazi nhazi nke, mgbe Tim Burton chọtara ya, ga-emecha ghọọ ihe nkiri, yana ọtụtụ n'ime mmepụta ya gara aga. Mana na…
Ị bụghị ụdị m, si na Chloe Santana
E nwere oge ịhụnanya nwere ike bụrụ ihe ntụrụndụ na -enweghị isi. Ị nwedịrị ike kwere na ị na -achịkwa ya, mana oge ịhụ n'anya na -enweghị nlọghachi na -agwụcha. Ewezuga… mgbe ihe adịghị mma nke ọma, iwe na -eju gị anya. Were ihu ọchị were ya. Ị nwere ...
Nke Patrick Ness wepụtara
Iche ụfọdụ nsogbu mmekọrịta mmadụ na ibe ya site na akụkọ ntorobịa dị oke mkpa na mmata ahụ na ime ka ihe dị iche iche gbasara ịdị njọ nke ndị mmadụ. M na -ekwu "dị oke mkpa" n'ihi na ọ bụ n'oge ntorobịa ka a na -esetịpụ ụkpụrụ nke ihe anyị ga -abụ na okenye. A na -ekpughe ntorobịa ...
Asatọ, site na Rebeca Stones
Iji dee akwụkwọ akụkọ zuru oke, anyị ga -ahụ nguzozi anwansi nke ọrụ okirikiri nwere ike ịmepụta. Ọ ga -abụzi ihe kwesịrị ekwesị ịkwụghachi mkparị, ịkpa oke na mmetụta mmụọ nke onye ntorobịa nke onye edemede ma ọ bụ onye edemede, dabere na ebumnuche ya, ọrụ ya na ọgụgụ isi nke onye edemede. NA…